“Waxaan ahay Maroodi, sideen ula dagaalayaa Quraanjo adiga oo kale ah.”. – Gool FM
“Waxaan ahay Maroodi, sideen ula dagaalayaa Quraanjo adiga oo kale ah.”.
Byare November 16, 2016
(America) 16 Nof 2016. Ninka ugu heysta feerka adduunka ee goor dhaweyd ka fariistay ciyaaraha Floyd Mayweather ayaa si xun u weeraray dagaalyahanka maalmahaan la joojin la’yahay ee Conor McGregor kaa oo ciyaara MMA, kaddib wararkii dhawaan soo baxay ee qal-qaalinaya inay dagaalamaan labadan ciyaarta ciyaaraha kala duwan.
Floyd Mayweather oo mudadii uu ku jiray Feerka aan marna laga adkaan ayaa inuu la dagaalo Conor McGregor iska dhaafee xitaa ka xumaaday in lala bar-bar dhigo.
Mayweather ayaa feerkiisii ugu horreeyay xirfadlenimo saftay 1996-dii, mana laga adkaan muddadii uu ku jiray iyadoo uu markii labaad ka fariistay feerka sanadkii la soo dhaafay.
“Ma ogeen in Conor McGregor aan marna laga adkaan, ma ogeen inuu 20-sano ahaa boqorka MMA isla markaana laga adkaan, ma ogeen inuu ahaa world champion shan heer oo kala duwan,” Mayweather ayaa sidaa u sheegay TMZ.
“Taasi waa wax aanan ogeen. Sidaa darteed waxaan qiyaasayaa in xarfaantiina aad ii sheegeysaan wax cusub haddii aad tiraahdaan isaga waa Floyd Mayweather-ka MMA.
“Haddii aad tiraahdaan waa Floyd Mayweather MMA, waxaan isku dayayaa inaan ogaado weligaa ma sameysay 300million oo doolar hal habeen?
“Weligaa ma sameysay hal habeen 100-milyan oo doolar? Weligaa ma sameysay 70-milyan oo doolar hal habeen? Sidaa darteed ilaa aad leedihihiin isaga waa Mayweather-ka MMA, waa Okey laakiin run ma ahan.
“Waxaan ahay rugcadaa, rugcadaa nool. Ciyaaraha Feerka waxaan siiyay sanado badan oo shaqo adag ah, waxay ahayd dhiig, dhidid iyo oohin.
“Waxaan aaminsanahay in Conor McGregor uu u baahan yahay inuu aado halkaa isla markaana uu sameeyo waxa uu sameeyo, laakiin marna aniga ha ila bar-bar dhigina Conor McGregor, waa xushmad darro wayn.
“Waxaan ahay Maroodi. Maroodigu kama cabto Quraanjada. Maroodigu aad ayuu u wayn yahay xitaa ma arko quraanjada.”.
Taageerayaasha Real Madrid oo jecel in Morata uu ku soo bilowdo Derby Madrid
RASMI: Barcelona oo heshiis qaali ah lagaartay Shirkada Rakuten